China Mkpọ tomato mado 70g (2) ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Tomato
Tomato mado bụ otu n'ime nri kwa ụbọchị. Ọ nwere ike ịme ka nri dịkwuo ụtọ ma sie ike maka ndị mmadụ. Anyị nwere ike ime dị iche iche dị ka kwa ahịa 'na-arịọ na ahịa mma ọkọlọtọ, na mado bụ nkịtị tomato eke-acha ọbara ọbara na agba, 100% na-enweghị nwekwara, oké na ọ dịghị mmiri. Anyị nwere ike ime GINO mma tomato mado.
"Ogo nke mbụ" bụ ụkpụrụ anyị mgbe niile ịhazi ihe mgbochi tomato.
Anyị factory ekpuchi ebe ndị 58,740 square mita, nke ugbu a kwa afọ mmepụta bụ 65,000 tọn, anyị nwere 9 mkpọ tomato mado na sachet tomato mado mmepụta edoghi, nke nwere ike ngwaahịa na ụdị nkọwapụta, dị ka 70g mkpọ mkpọ mado, 140g mkpọ mkpọ tomato, Nchịkọta tomato mkpọ 198g, paịde mkpọ mkpọmkpọ iko 21g, ngaji tomato 400g mkpọ, mado tomato 800g mkpọ, 830g mkpọ mpekere tomato, mpekere tomato mkpọ mkpọ 1000g, ngaji tomato mkpọ mkpọ, 2200g mkpọ mpekere tomato, 2.2kg + 70g mkpọ mkpọ tomato, 3kg mkpọ mkpọ tomato mado, nke kasịnụ buru ibu 4.5kg mkpọ mkpọ tomato wdg.
Isi ahia anyi bu mba Afrika, Middle East, USA na mba South America kariri obodo na mpaghara 75.
Anyị na-eji igwe dị elu, igwe mkpo igwe. The ngwongwo ga-ọzọ lekwasị na akọrọ, na ndị ọzọ na nke ukwu nke ngwaahịa ga-kwajuru, anyị nwere ike ịzọpụta ọzọ na-eri n'ihi na ị.
Anyị niile na tins na-acha ọcha ma ọ bụ odo seramiiki mkpuchi n'ime iji zere nchara na-ejide ezi àgwà nke tomato mado.
1. Anyị nwere ike inye ndị ahịa ihe nlele kpamkpam, naanị ndị ahịa chọrọ ndị ahịa ka ha kwụrụ ụgwọ ọnụego, yana kedu nke ọzọ, anyị nwere akaụntụ DHL nke anyị na mbelata 50%, ị nwekwara ike ịkwụ anyị ụgwọ tupu oge eruo ma anyị zitere gị ihe atụ site akaụntụ anyị, nke ga-azọpụta gị ọtụtụ ihe!
2. Anyị ugwo okwu bụ 30% nkwụnye ego na itule ga-eme megide oyiri nke B / L, ma ọ bụrụ na site L / C, anyị kwesịrị okpukpu abụọ ego ma gosi ma nwere ike na-anabata.
3. Oge ezipụ: 30 ụbọchị mgbe nkwekọrịta kwadoro, nkwụnye ego natara na akara gosipụtara.
4. SGS na BV na-anara nke ọma, ị nwere ike ịkpọtụrụ ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
5. Halal, ISO, HACCP na FDA dị.
6. Anyị nwere onwe anyị ọkachamara mmebe, nwere ike ime ka imewe mara mma na ngwa ngwa.
Nke gara aga: Mkpọ tomato mado 70g
Osote: Mkpọ tomato mado 210g
Canning Tomato Tapawa
Dị Iche Iche Tomato Tapawa
Ugboro abụọ uche Tomato Paste
Ewepụghị Sachet Tomato Paste
Akwa Ogo Tomato Paste
Obere akpa Tomato Paste
Tomato Tapawa China Supplier
Tomato Tapawa gaa na mmiri
Tomato N'ogbe Paste